Nhau - Curator Hotel & Resort Collection Inosarudza React Mobile Seyainofarirwa Mupi weVashandi Chengetedzo Zvishandiso.
Kugamuchirwa kune webhusaiti yedu.
Sarudzo Hotera Kamuri yekurara Set
Hilton Hotel Kamuri yekurara Set
IHG Hotera yekurara Set
Marriott Hotel Kamuri yekurara Set
Radisson Hotel Kamuri yekurara Set
Wyndham Hotel Kamuri yekurara Set
Hotera Vanity Base
Curator Hotel & Resort Collection Inosarudza React Mobile Seyainofarirwa Mupi weVashandi Chengetedzo Zvishandiso
React Mobile, mupi anovimbika zvikuru wemhinduro dzekuvhunduka mabhatani ehotera, uye Curator Hotel & Resort Collection (“Curator”) nhasi vazivisa chibvumirano chemubatanidzwa chinogonesa mahotera ari muKuunganidzwa kushandisa React Mobile's best-in-class security device platform kuchengetedza yavo. vashandi vakachengeteka. Vemahotera mukati meCurator vanogona kuendesa React Mobile's GPS geolocation uye Bluetooth? beacon tekinoroji yekupa kurongeka kusingaenzaniswi kutsvaga mushandi ari mukutambudzika. Iyo kambani ine hombe hotera yevatengi base yechero panic bhatani tekinoroji.
"Curator inofara kubatana neReact Mobile kubatsira nhengo dzehotera dzedu kuchengetedza vashandi vavo," akadaro Austin Segal, Mutevedzeri weMutungamiriri weCurator. "React Mobile haizivikanwe kune dzakawanda zvezvivakwa zveCurator, zvakaiswa mumahotera makumi matatu nematanhatu kusvika parizvino. Tine chivimbo mukukwanisa kwavo kuendesa mhinduro dzinodhura uye dzakaringana dzekuchengetedza, uye tinotarisira kushanda navo kuchengetedza nhengo dzedu dzakanyanya kukosha - vashandi vavo. "
Nhengo dzeCurator dziri kutora chikamu dzinogona kushongedza vashandi vavo neine hungwaru inopfekwa LTE panic bhatani mudziyo unogona kukurumidza kubatika kana rubatsiro ruchidikanwa. Bhatani rega rega rine chiziviso chemushandi chakasiyana. Madiki ebhatiri-anoshanda eBluetooth mabhekoni mukamuri yega yega anopa nzvimbo yemushandi. Yambiro nenzvimbo inotumirwa pamusoro penetiweki yeLTE yenzvimbo kune network yekuchengetedza hotera kuti timu yevatariri inonyatsoziva kuti ndiani anoda rubatsiro uye kupi. Kunyange iyo yambiro ichiri kushanda, sisitimu inoteedzera nzvimbo yemushandi munguva chaiyo. React Mobile's flexible cloud-based platform inogonesa Curator mahotera kugadzirisa software uye kubatana nemamwe masisitimu atove kushandiswa. Iyo React Mobile Dispatch Center ichagadzirisa timu yekupindura yehotera uye mazita ekuzivisa, inoshingairira kutarisa mabhekoni nemabhatani ekubatanidza uye hupenyu hwebhatiri, kuzivisa ziviso, kugadzirisa vanopindura munguva chaiyo, uye kuteedzera uye kunyora nhoroondo yese yekuzivisa.
"React Mobile inodada kuve mudiwa weCurator Hotel & Resort Collection pamidziyo yekuchengetedza yevashandi," akadaro React Mobile CEO John Stachowiak. "Kuita tekinoroji post-denda rinogona kunge riri basa rakaoma, asi nekuchengetedzeka kwevashandi panjodzi, kunyanya munzvimbo yehotera, zvakakosha. React Mobile iri kuita kuti mabhatani ayo ekuzivisa ave nyore uye anodhura-inoshanda kuendesa. Haisi chete mhinduro yedu inogonesa vashandi kuCurator mahotera ane anodiwa zvakanyanya - uye akarairwa nehurumende - midziyo yekuchengetedza, asi nekudyara mukuchengetedzeka kwevashandi, React Mobile ichave nemhedzisiro yakanaka pakukwezva mihoro uye nekuchengetedza basa.
Curator Hotel & Resort Collection ndeye muridzi-centric yekugamuchira vaeni chikuva inopa imwe yemakwikwi kune yakazvimirira mararamiro emahotera anoda kukwidziridza kuita kwavo. Curator inopa mahotera enhengo zvakanaka-mu-kirasi zvibvumirano zvekushanda, masevhisi, tekinoroji, uye mamwe mabhenefiti pavanenge vachibatana pamwe chete sechikamu cheCurator Hotel & Resort Collection-kubvumidza nhengo kuchengetedza rusununguko rwadzo uye izvo zvinovaita vakasiyana.
Nhasi, React Mobile iri kupa mhinduro dzemabhatani ekuvhunduka kumahotera akanakisa munyika, aine vatengi vepahotera vanopfuura mazana matanhatu vanomiririra makamuri zviuru zana negumi nemazana akavharwa uye mabhatani anopfuura zviuru makumi mashanu ekutya akaiswa. Kuti uwane tsananguro yevhidhiyo yeReact Mobile, tinya apa.
Nezve Curator Hotel & Resort Collection
Curator Hotel & Resort Collection iunganidzo yakasarudzika yemabhururu madiki akasarudzwa nemaoko uye akazvimirira mararamiro emahotera nenzvimbo dzekutandarira pasi rese, yakavambwa nePebblebrook Hotel Trust uye vanomwe vanotungamira mahotera vanoshanda mumahotera. Curator inopa mararamiro emahotera simba rekukwikwidza pamwe chete achibvumira nhengo dzayo rusununguko rwekuchengetedza izvo zvinoita kuti mahotera avo ave akasiyana. Inopa mahotera emararamiro akazvimirira mabhenefiti ekushamwaridzana nemamwe akasarudzika mararamiro emahotera uye mhando uchitora chikamu mune akanakisa-mu-kirasi-kushanda zvibvumirano, masevhisi, uye tekinoroji. Pamusoro pePebblebrook, nhengo dzekutanga dzeCurator dzinosanganisira Benchmark Global Hospitality, Davidson Hospitality Group, Noble House Hotels & Resorts, Provenance, Sage Hospitality Group, Springboard Hospitality, uye Viceroy Hotels & Resorts. Kuti uwane rumwe ruzivo, shanya www.curatorhotelsandresorts.com.
Yakavambwa muna 2013, React Mobile mutungamiri wepasi rose mukupa mabhatani ekuvhunduka mhinduro kumahotera. Yedu yepamusoro-ye-kirasi yekuchengetedza vaenzi chikuva inobatsira mahotera kuchengetedza vashandi vawo. Iyo React Mobile system ipuratifomu yakavhurika uye inochinjika inobvumira manejimendi kuendesa zviwanikwa zvekupindura kunzvimbo chaiyo yenjodzi mukati memasekonzi echenjedzo, kuwana rubatsiro kune kwainodiwa chero kupi kana kunze kwenzvimbo. Munguva yekukurumidza mhinduro nguva dzakakosha uye React Mobile inopa maturusi ekupindura nekukurumidza. Kuti uwane rumwe ruzivo, shanya http://www.reactmobile.com.
Nezve Pebblebrook Hotel Trust
Pebblebrook Hotel Trust (NYSE: PEB) inzvimbo inotengeswa neruzhinji real estate investment trust (“REIT”) uye muridzi mukuru wemahotera emudhorobha uye emararamiro ekugara muUnited States. Kambani ine mahotera makumi mashanu nembiri, anosvika zviuru gumi nezviviri nemazana masere emakamuri evaenzi mumisika gumi nemana yemadhorobha uye yekutandarira yakatarisana nemaguta ekumavirazuva. Kuti uwane rumwe ruzivo, shanya www.pebblebrookhotels.com uye titevere pa @PebblebrookPEB.
Nguva yekutumira: Aug-28-2021
Chirevo chinoratidza zvakare muna 2020, se ...
Tifonere Iye Zvino: 0086 15356090777